गोरखामा तमू ल्होसारको रौनक (फोटो फिचर) - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गुरूङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पुस १५ गते आज ‘तमु ल्होसार’ पर्व मनाइरहेका छन् ।
‘तमु ल्होसार’ पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ । गुरुङ बाहुल्य रहेको गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुस १५ मा यो पर्व मनाउने गरिएको हो ।
सोही पर्वको अवसरमा बिहिबार गोरखामा विभिन्न कार्यक्रम गरी तमु ल्होसार मनाएका छन् ।
‘ल्होसार आदिमकाल देखि तमु जातिको जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्पराबाट निरन्तरता दिँदै आएको मुख्य पर्व पनि हो । पहिले देखि नै तमु जातिको ल्होसार नश्लको हिसावले आदिम साम्यवादी युग देखि पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव तिर सूर्य नजिक पर्न जाने र कहिले दक्षिण ध्रुव तिर सूर्य नजिक पर्न जाने ६÷६ महिना पुस १५ र असार १५ मा समय परिवर्तन हुन्छ भनेर आदिमकालमा तमुु जातिहरुको खेगी गुरु ज्यूहरुले निर्धारण गरी राखेको ल्होसार पर्ब हो’ लेखक टेक बहादुर गुरुङले भने ।
पुस १४ गते राती सबै भन्दा लामो रात र छोटो दिन हुने उनले बताए । उनले भने, ‘पुष १४ गते सबै भन्दा लामो रात हुन्छ । यो बेलामा बन जंगलमा सानो फिस्टे चरा पनि भोकले ३ मुर्छा पर्छ भन्ने कथन छ ।’
यस्तै, १४ पुस राती मध्यरातबाट धेरै पहिलेका तमु जातिहरुले बत्ती बाली खेमा राख्ने चलन रहेको पनि गुरुङले बताए । खेमा राखि सके पछि रात भरी क्रमश : अलि–अलि फुलफुलहरु, बनका तरुलहरु र रोटीहरु खाइ रहनु पर्ने भन्ने परम्पराको किम्बदन्ती पनि रहेको बताएको छ ।
प्राकृतिक बोन संस्कार अनुसार १५ पुसलाई नै आधार मानि तमु जातिहरुले आफ्नो ल्होसार पर्व निर्धारण गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइउदै आएको गुरुङले जानकारी दिए । पुस १४ लाई गएको ल्होलाई विदाई र पुस १५ नयाँ ल्होको आगमन्को स्वागत गर्दै निधारमा सेतो टिका लगाई शुभकामना आदन प्रदान गरिन्छ ।